စပိန်နဲ့ယူရိုဇုန်: frostbite လက္ခဏာနှင့်စီးပွားရေးပင်ပန်းနွမ်းနယ်?
24, ဇွန်လ 2019
စတင်ပြုလုပ်ခြင်းစီးပွားရေးကိုစပိန်နဲ့ယူရိုဇုန်: frostbite လက္ခဏာနှင့်စီးပွားရေးပင်ပန်းနွမ်းနယ်?
18, ဇွန်လ 2018 Belz စီးပွားရေးကို 0
အမှတ်လက္ခဏာ စီးပွားရေးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု ဒါဟာကြှနျုပျတို့သညျ "မှတ်စုများ" အစား "Nemo" နှင့်စပိန်မှတဆင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်၏ကို Nautilus နှစ်ဆယ်ရာစု၌ခိုလှုံကြာသည်ဟုယုံကြည်သောသူ Sanchez အမည်ရှိတစ်ဦးအပျော်တမ်းနှင့်မျွောကပ္ပတိန်, တစ်ဦးတကယ်တော့နှင့်သနားဖြစ်ပါသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့်ရာဇဝတ်သားကာပိုးသမုဒ်ဒုက္ခသည်များ။
ရသည်မှာလက်ရှိ စပိန်၏ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ ဒါဟာအင်အားလေတိုက်နှုန်းကိုလျစ်လျူရှုဖို့ကြိုးစားပါတယ် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတဦးတည်းယူရိုဇုန်ခြိမ်းခြောက် လေးနှစ်ဆက်တိုက်ကြောင့်စိုက်ပျိုးထားပြီးစတင်အနီး Miss အမ်းအမ်းကြည့်ရှုလေ့လာပေမယ့်မရတာတုန်းပဲမြင်နိုင်အစွန်းရောက်အစီအမံမှတွယ်ကပ်ဖို့မကြာသေးမီအတိတ်ကာလကိုယူကြရသည်။
La ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစီးပွားရေးကို ကာကွယ်ရေးဥပမာအဖြစ်ဂျာမန်မော်ဒယ်သတ်မှတ်ထားပါကယခုသင့်ဝစွာတစ်ဦးအာကာသကာကွယ်တားဆီးဖို့ emplaced ဖြစ်ပါတယ် အကုန်အကျများနှင့်အသုံးမကျသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး, ဒါကဆိုလိုသည်မှာသူကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ပင်ယေဘုယျနှင့်ဝန်ထမ်းများမှတရားမျှတအချိုးအစားအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. အခွန်ညှိနှိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲထက်ပိုအခွင့်အရေးရှိပါတယ်, အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု၏နိယာမအပေါ်တစ်ဦးမိုးရေရှည်တည်တံ့ရေးကာကွယ်ပေးသည်။ အဘယ်အရာဖြစ်လာဖို့ "လူအပေါင်းတို့အဘို့ပင်မစာမျက်နှာ" ဒါဟာပြီးသား "အခြား" ဒီထက်လူထုကြိုက်, ရှေးရိုးစွဲတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်တစ်ဦးသံသယရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျစရိတ်ကစီမံခန့်ခွဲဖြစ်လာသည်။
ဤတွင်, စပိန်အတွက် အမှုအရာအခြို့ကိုအရာရှိများကြောင့်ဆိုပါစို့စေသည်ထားတဲ့ကျနော်တို့ကတိကဝတ်သက်သာချောင်ချိရေးလက္ကားနှင့်အတူပါကအားသွင်းစောင့်ရှောက်လျှင်, သင်္ဘောနစ်မြုပ်စေခြင်းငှါတစ်လိုင်းမှားယွင်းတဲ့သို့မဟုတ်ညံ့ဖျင်းသိသိသာသာ waterline နဲ့သင်္ဘော "နက်နဲသောအရာ" အားဖြင့်သွားရ စီးပွားရေးအဘယ်မျှမဟုတ်သကဲ့သို့ရှည်လျားကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှော်နှင့်အဏ္ဏဝါစွမ်းအင်စွမ်းအားဖြင့်တစ်ဦးရေငုပ်သင်္ဘောကနေအုပ်ချုပ်နေသည်ထင်အဖြစ်ဖွစျနိုငျကွောငျးကို fabular နိုင်ဘူး။ ဒီတော့လျှင်, မာရီယို Draghi စုံတွဲအားလုံးကိုအဖွဲ့ဝင်ကြောင်းဖြစ်သောဆီမီး, ပြင်ပကနေရွက်လွှင့်ဖို့ submersible အတင်းအကျပ်သည်သူ၏ periscope သုံးပြီးလိုပဲ "Nemo" နဲ့ကပ္ပတိန် "မှတ်စုတို" ကိုအစားထိုးအကြံပြုခြင်း, ကြားဝင်သင့်တယ် ဥရောပသမဂ္ဂမလုံလောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်၏မလိုအပ်တဲ့ဝန်အတိမ်အနက်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့ယာယီတည်ငြိမ်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့နဲ့သင်္ဘောနှင့်အတူတက်ထားရန်ချောင်းကိုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ Draghi ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြောကြားလိုက်သည် ယူရိုဇုန်တိုးတက်မှုနှုန်း ထိုသို့အမေရိကန်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်သံသရာတစ်ဦးအနိမ့်မှလမ်းပေးရပြသယူဆထင်ရှားစေသည့်ညွှန်းကိန်းမြှင့်တင်ရန်လို, မျက်နှာကျက်နှင့်အောက်ခြေအကြားကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ် ဥရောပသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့်အစီအစဉ်များကို perforating အားဖြင့်အတ္တလန္တိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှု, ဘီစီသူတို့စတင်ခင်မှာ အတိုးနှုန်းမြှင့်ဘယ် 2019 ၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်းမြင့်တက်တင်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတစ် Battery ကိုသိုးထီးတကောင်နဲ့တူစိမ့်ဝင်သွားတယ်လြှငျ, နေပါစေသူအမေရိကန်စီးပွားရေး, ဖြစ်ကောင်းတဲ့ကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါများတွင်ဥရောပ၌တိုးချဲ့နိုင်သည့်တရုတ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအကူအညီကိရိယာအစုံ၏အကျိုးဆက်များအထဲကအာဏာရခြင်းမရှိဘဲ, ထိခိုက်လိမ့်မည်ဟု တိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက်ပေမယ့်ကျယ်ပြန်ထိန်းချုပ်မှုအဖျားနိယာမ။
အမေရိကန် ဒါဟာဇွန်လ၏ဒုတိယရက်သတ္တပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည် 2015 ထံမှပိုက်ဆံ၏စျေးနှုန်းထဲမှာသတ္တမမြင့်တက်အဆိုပါရှိမရှိစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဖြစ်စေဆက်လက်အရာ, နိုင်ငံခြားစျေးကွက်တားနှင့်ယူရိုကျုံ့စေ ဘီစီ သငျသညျလာမည့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှု၏ဆိုက်ရောက်ရှေ့တော်၌ထိုအတိုးနှုန်းမြှင်လှတျလပျမှုအရပါလိမ့်မယ်။ မမြင်နိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လက်ရှိ စပိန်အစိုးရ သူသည်အစဉ်အမြဲဟောင်းလမ်းမှအဖြေတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့ကြောင့်, အ carnivalesque နှင့် pyrotechnic ဘုန်းအသရေကိုတားဆီးသောအားနည်းချက်များကိုလေ့လာခြင်းစဉ်းစားရန်စွမှစောလွန်းကြောင်းကိုနားလည်ဘယ်မှာလူမှုရေးအကူအညီများဘတ်ဂျက်မှအချိုးအစားအတွက်အခွန်ပြုစုပျိုးထောင်နှင့်နေသည် ကနျြးမာရေးပရီမီယံချွတ်ယွင်း, ပညာရေးထိပ်တန်းနှင့်အမျှအစဉ်အမြဲအစဉ်မပြတ်ရှိသည်ဟုအဖြစ် "bloke" ဖြစ်ပါသည်, သေးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီမဟုတ်သောကွာဟချက်ကိုထမ်းမ shroud အောင်ဆက်လက်စိတ်ထဲလာရမညျအရာသည် "gentrified" နှင့်မိမိကိုယ်ကိုဖြစ်ပါသည် ။
ဘဏ်များလွှမ်းမိုးသည် "သငြ်ကူးေူပာင်းမြ" detect လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရလိမ့်မည်, ကဏ္ဍအားလုံးတွင်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် buckshot ဖြစ်လာများနှင့်အလုပ်လက်မဲ့အခါ turntable နည်းလှပသောနှင့်အတူကခုန်ဖို့အသုံးပြုအုပ်စုတစ်စု၏မျှော်လင့်ချက်များတူးမည် "သှ" အပြည့်အဝအသံအတိုးအကျယ်မှာသတ်မှတ်ထားပေမယ့်ထိုအတောအတွင်း၌၎င်း, ဂဏန်းစာရင်းဇယားအနက်နိုင်ခွင့်မပြုသင့်သည်ကို တင်းကျပ်ဆိုင်းဘုတ်များရည်ရွယ်ချက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်သူများ Watch န်ထမ်းတို့၏စီးပွါးစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှင့်မသေချာမရေရာနှင့် undeciphered မူဝါဒ၏ကြိမ်အတိအကျဘောလုံးကစားရန်စည်းရုံးကြသည်မဟုတ်သောသူတို့ကိုဂိမ်းမဆိုအတိုကောက်အတွက်မဟုတ်ဘဲဘိုးလင်း "ကိုပြုလုပ်အတူမိစ္ဆာအံ့ဖွယ်အဆောင်တတ်၏ "သို့မဟုတ်များ၏ဖြိုဖျက်" မျောက် canards "ဘာမျှမလုပ်ပေးကြောင်းဖျော်ဖြေရေးမှတဆင့်ကျနော်တို့ကသူတို့နှင့်အတူ, မိုဘိုင်းဖုန်းများယူဆောင်လာ" "နှင့်" အိမ်ရာအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ထက်အမြဲရောက်လာကြာကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်း "ချက်ချင်းပြန်လည်နာလန်ထူကတိပေးထား နေဆဲစပိန်ကောင်းကင်တံခါးဝကြောင်းယုံကြည်သောသူတို့အဖို့, အလုပ်ပါမစ်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီများ။
ထိုအဟုတ်ကဲ့, အစကားမစပ်, ပင်စင်လစာ၏ညှိနှိုင်းမှုနှင့်သက်တောင်ချူချာအလုပ်လက်မဲ့ပိုက်ဆံ၏စျေးနှုန်းတစ်ခုတိုးလာသဖြင့်ဆန်တဲ့, ပြီးသားဝမျးသာကျနော်တို့ရန်အသုံးပြုသင့်ကြောင်းချိန်ညှိဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်ပေးရန်စားသုံးသူအဓိကတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစီးပွားရေးကျဆင်းမှု, belatedly သေး Pascal ၏နိယာမတွေနဲ့ကြုံတွေ့မရှိသေးပေတစ်ခုမညီမမျှမှမအောင်မြင်သုံးပြီးလာကြ၏။
စီးပွားရေးပညာရှင်များအကြံပေးစကားကိုနားထောငျ နိုင်ငံရေးပါတီများ အဆိုပါ Anomaly ၏ symbology နှင့်ဖော်ပြရန်လိုက်လျောညီထွေမှုအတွက်အဖြစ်အဖြစ်ပုံပေါ် စီးပွားရေးကျဆင်းမှု၏အစောပိုင်းလက္ခဏာများ:
Pascal ရဲ့နိယာမဟာဆွန်းနယ်ပယ်ကို အသုံးပြု. check လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် ( စျေးကွက်ဖိုဆုံးရှုံး ), ချွင်းချက်မပါဘဲကွဲပြားခြားနားသောနေရာများ Perforating ( ကဏ္ဍများသို့မဟုတ်သူ့ဟာသူ submersible သူဟာအစိုးရပြေး) ထိုအခါ plunger နှင့်အတူကပေး ( ပိုက်ဆံ၏စျေးနှုန်း ) ။ ရေနှင့်အတူလယ်ပြင်ဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အခါ ( ကျဉ်းမြောင်းရေငုပ်သင်္ဘောအတွင်းအကျိုးစီးပွားနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ခွဲဝေမှု ) ထို plunger နေဖြင့်ဖိအားများကြောင့်ရေအတူတူမြန်နှုန်းနှင့်အတူအားလုံးတွင်းထွက်ကြွလာသည်ဟုလေ့လာတွေ့ရှိထို့ကြောင့်ကောင်းစွာဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည့်တူညီသောဖိအားနှင့်အတူနေသည် "ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်"ဖြစ်ကောင်းပိုမိုမြင့်မားရေနံစျေးနှုန်းများ, မတည်ငြိမ်မှုများကပိုမိုဆိုးရှား ပထဝီနိုင်ငံရေး ကျနော်တို့ palliative နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပိုပြီးတွေ့ရခဲသောအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူသံချေးတက်ရေငုပ်သင်္ဘောစပိန်လှေလှော်နဲ့လက်မောင်းပါတီက navigate ကြောင်းအမြဲအသုံးတော်ပီဒိုကစီးပွားရေးကာကွယ်ရေး ပတ်သက်. ပစ်လွှတ်ပြွန်ထဲမှာဖမ်းဖြစ်နေဆဲသောကြောက်လန့်ကြွက်, ဖြည့်ဆည်းဖို့လိုအပ်ကြောင်း, အမြဲတမ်းသင်တန်း improvising ကရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ သိ. မဟုတ်။
23 စက်တင်ဘာလ 2018 5
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြထားသောအမြင်၏ဤartículoTweetအရေးကြီးသောအပေါ်အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်ရှင်းလင်းချက် Share: ကျနော်တို့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Isabel Coixet ၏စာသား၏ရလဒ်ဖြစ်မထားပါဘူးမအာမခံချက်ရှိ [ ... ]
6, ဇွန်လ 2019 0
Comparte este artículoTweetLos creadores de los pequeños mundos embadurnados en ese tinte político y social que narraatodas horas una libertad reprimida significada en un lazo amarillo, sumidos en la ambición propia y de [ ... ]